[Bookademy] Review Sách “Đồi Thỏ”: Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu | Anybook.vn - Anybook
[Bookademy] Review Sách “Đồi Thỏ”: Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu | Anybook.vn
Rabbit Hill – asa literatiora lehibe, tantara hafahafa momba ny bitro izay manokatra tontolo maro loko miaraka amin’ny fiteny famoronana sy fomba fijery vaovao momba ny tontolo manodidina. Izy io koa dia fifangaroan’ny epic epic sy fitsangatsanganana mahagaga. Ny boky dia natao ho an’ny ankizy, fa manana antso mafy ho an’ny olon-dehibe, mirakitra filozofia lalina ny fiainana, lesona momba ny fitokisana, ny fitiavana ny fianakaviana, ny herim-po ary indrindra indrindra, ny faniriana ho an’ny tena noho ny lehibe. Ny havoanan’ny Rabbit nataon’i Richard Adams dia mendrika ny ho asa soratra mandritra ny fotoana rehetra.
Richard Adams dia mpanoratra manan-talenta manana tantara an-tantara maro, ary ny Rabbit Hill dia iray amin’izy ireo. Ny tantara dia nanomboka tamin’ny zava-nitranga fony ny mpanoratra 52 taona, nilaza tamin’ny zanany roa vavy tamin’ny dia lavitra fiara satria nilaza izy ireo fa tena leo. Resy lahatra izy avy eo mba hanoratra indray ilay boky sy hamoaka azy voalohany tamin’ny 1972 tany Londres rehefa nolavin’ireo mpamokatra azy impito. Fotoana fohy taorian’izay dia nahazo ny Medaly Carnegie sy ny Loka Mpiambina ho an’ny tantara foronina ho an’ny ankizy ny asa. Tamin’ny 1973, ny Rabbit Hill dia navadika ho sarimihetsika mihetsika. Tamin’ny taona 2003, ny BBC dia nifidy azy io ho tantara mitohy amin’ny fotoana rehetra.
Raha ny marina, mandra-pahavitan’ny famakiana Rabbit Hill dia tsy fantatro fa nahavita zava-bita be dia be izy io. Izany koa angamba no mahatonga ny fanintonana hafahafa. Mety ho leo ianao amin’ny voalohany, satria tantara an-tsary ho an’ny ankizy izy io fa misy hateviny ho an’ny olon-dehibe, hatramin’ny 492 pejy ry namana. Minoa ahy anefa fa raha vao manomboka ianao dia ho sarotra ny hijanona. Manome antsika foana ny fahatsapana miandry zavatra, kely tebiteby, tebiteby kely, na fahalianana na fientanentanana, ireo fihetseham-po rehetra ireo dia mifangaro mba hamoronana tsiro hafahafa, izay tiako. Izy io dia misarika antsika amin’ny teny rehetra, ny zava-mitranga rehetra mitranga ao amin’ny tantara, ary mitondra antsika moramora ho amin’ny pejy farany amin’ny fotoana rehetra. Ary avy eo any amin’ny toerana misy antsika dia nenina kely, fahadisoam-panantenana kely. Tsy noho ny fiafarany ratsy, fa satria mbola te hiroboka ao anatin’io aventure io indray isika, dia tsy te hijanona toy izany. Fa ny tantara tsirairay dia misy fiafarany, ny fiafarana tsy midika hoe fiafarana fa vao maika manokatra pejy vaovao, ary mila manaiky izany isika. Misy ny boky mifarana, somary reraka ny fihetseham-pontsika, fa misy koa ny boky tonga raha vao tsapantsika fa tapitra ilay izy, ny tenantsika dia tsy te hanaiky izany, fa tsy mitsahatra amin’ny tsirony.hatramin’ny herinandro vitsivitsy na Bebe kokoa. Amiko dia asa toy izany ny Rabbit Hill.
Rabbit Hill – ny hira epic an’ny zazalahy bitro be herim-po
Nidera an’ilay tantara toy izao ny The New York Times: “Napetraka teo amin’ny toerana misy an’i Berkshire Down, izay nihalehibe tao amin’ny faritra milamina misy havoana, saha, sakeli-drano, ary ala andrefana. Londres. Tantaran’ny ankizy mahazatra ny Rabbit Hill, feno zava-baovao sy tolona… Fanoharana tsy lany andro ny amin’ny fahalalahana, ny fitondran-tena ary ny toetra maha-olombelona. Mihoatra noho ny herin’ny teny sy ny faharanitan-tsaina, ny mpanoratra Adams dia mamelona ireo olona feno maha-olombelona sy fahamarinana amin’ny alalan’ny bitro, miaraka amin’ny tahotra mangovitra, ny tsy fahalalam-pomba, ny fahasahiana ary ny kolontsain’ny vahoaka. Fotoan’ny ohabolana sy ny tononkalo”. Ny havoanan’ny bitro dia dia lavitra na ny marimarina kokoa dia ny fifindran’ny bitro any amin’ny tany vaovao. Ny dian’ny “vahiny” – ny teny ho an’ny laharan’ny bitro mahazatra amin’ny taona voalohany amin’ny fiainana – dia toa tsy azo atao, satria ny loza any ivelany dia nandrahona ary mety hanafika azy ireo amin’ny fotoana rehetra. Saingy mbola misafidy ny handeha, handeha hitady fahafahana, hanorina fiainana sambatra kokoa any amin’ny tany vaovao.
READ 10 sách hay về thành công giúp mở rộng và thực hiện giá trị của chính mình trong cuộc sống. | Anybook.vn
Manomboka any amin’ny sahan’ny bitro Sandleford ny fitsangatsanganana, avy amin’ireo bitro tanora “vahiny” izay sahy matoky ny fihevitry ny bitro kely marary fa ny toerana onenany am-pilaminana dia hiharan’ny loza mampahory. Ary ny hany afa-mandositra io fandrahonana io dia ny miala amin’ny sahan-trano, mandeha any amin’ny toerana hafa hipetrahana. Sarotra ny hino sy hanaiky ho an’ny bitro hafa, satria tsy azo atao satria ny tenin’ny bitro tsy misy firazanana malaza, tsy ampy lanja sy haavony, dia tsy maintsy miala amin’ny toerana mafana toy izao. Ary sarotra ihany koa ny mandresy lahatra ny Tompon’ny Tea Maitso – ny Mpitarika ny bitro – amin’izay hitranga, ka ny hany azony atao dia ny mitondra bitro betsaka araka izay azo atao. Ary mihaona rehefa miposaka ny volana dia hanomboka ny dia. Taorian’ny ezaka be, dia nahavita nandresy lahatra bitro vitsivitsy hiaraka aminy izy ireo, ary ny vondrona dia ahitana ireto mpiady manaraka ireto: Hazel, Alakamisy, vilany tany, Wig, Dandelion, Raspberry, Antler, Grey Silver, Oak. Tamin’ny alin’ny volana, taorian’ny fifandonana sy fifandonana, dia nanomboka tamin’ny fomba ofisialy ny diaben’izy ireo.
Eo ambany fitarihan’ny Mpitarika Hazel, ary miaraka amin’ny fihevitry ny Alakamisy kely, ny bitro dia naharesy olana maro: manomboka amin’ny sahan’ny bitro “artifisialy” an’ny Golden Primroses, ka hatramin’ny fihaonan’izy ireo amin’ny voromahery. ranomasina Kehaar, avy eo ny fanamby hahitana. ny bitro vavy tao amin’ny toeram-piompiana Nuthanger sy Efrara, avy eo ny fifandonana tamin’ny Marshal of Patchouli, ary tamin’ny olombelona … Nisy ny ady saika maty, toa vita ny zava-drehetra. tapitra, fa avy eo dia fitiavana, firaisankina ary herim-po. izay nanampy azy ireo handresy ny zava-drehetra. Avy amin’ny bitro hafahafa, miaraka amin’ny hambom-po, fa koa avy amin’ireo ady amin’ny fiainana sy ny fahafatesana, dia nanjary nifikitra sy nifankatia kokoa izy ireo – zavatra izay tsy mbola tsapany teo aloha, tany amin’ny saha bitro tao an-trano.
Tsy mankaleo na oviana na oviana ny fiainan’ny bitro eo ambanin’ny penin’i Richard Adams. Amiko, ny pejy tsirairay amin’ny boky dia miseho ho toy ny sary mahafinaritra amin’ny teny, avelao ny eritreritrao hanaraka ny penin’i Adams ary avy eo dia hiseho mazava sy mazava tsara ny tontolon’ny Rabbit Hill: “Tontolo mbola tsy hitanay hatrizay, izay feno korontana ny fiainana any an-tsaha, any anaty ala, amoron-drano, lavitra ny tanàna sy ny tanàna.”
Ankoatra ny tantaran’ny aventure, ny tantara angano momba ny razamben’ny bitro – ilay printsy miaraka amin’ny fahavalo arivo El-Ahraihah – dia notantaraina tamin’ny alalan’ny tenin’ny bitro dandelion, ho antony manosika ny bitro hanohy. Sahala amin’ny olombelona, ​​ny angano momba ny bitro dia toy ny harena tsy manam-pahataperana amin’ny fomba fiaina, fisainana, ary lesona mampiavaka ny karazany, izay tantaraina amin’ny vazivazy sy mampihomehy, ho zava-nisongadina amin’ny tantara. Lasa mahafinaritra sy vaovao ny tantara. Ny endri-javatra manokana mahatonga ny fahombiazan’ny asa dia ny fametrahana ny tenany amin’ny toeran’ny bitro tena izy ny mpanoratra, manandratra ny masony hijery izao tontolo izao amin’ny toerana ambany ary avy eo mahatsapa izao tontolo izao miaraka amin’ny saina sy ny saina. fo. Nanomboka teo dia lasa mavitrika sy akaiky ny habaka voajanahary, ny zavatra manodidina dia lasa lehibe sy midadasika kokoa, miaraka amin’ny tsirony sy timbre mazava kokoa. Izany no antony ilazako ny fomba nandokoan’ny mpanoratra Adams sary mahafinaritra momba ny teny.
READ Cuốn sách Nghệ thuật sống bạn nên đọc | Anybook.vn
Amin’ny ankapobeny dia asa goavana ity, saingy tamin’ny voalohany dia tsy afaka ny ho very hevitra aho satria be dia be ny bitro manana anarana hafahafa. Mahita namana maro aho milaza fa manana anarana mahazatra sy akaiky ny bitro, saingy amiko dia hafahafa sy sarotra tadidy ireo anarana ireo. Tsy maintsy ekeko fa raha vao namaky azy aho dia mora very hevitra tamin’ireo anarana ireo.
Ary isaky ny mamaky anarana aho dia tsy maintsy mieritreritra hoe bitro inona izany, misy bitro maro ry namana. Samy manana ny toetrany sy ny toetrany ny ankizy tsirairay. Richard Adams dia nanangana azy ireo ho toy ny tena mpiady. Hazel dia be herim-po, manapa-kevitra, stratejika ary mitsinjo mialoha, mendrika ny ho mpitarika ny bitro, Bigwig dia miavonavona, tia ady, matanjaka ary atletika ho tena mahery fo. Ny alakamisy dia kely, malemy, saingy manana famantarana manokana. Earth Pot dia kely, saro-kenatra, fa tena manetry tena ary izy ihany no afaka manao asa manokana. Mpikambana tena ilaina ao amin’io vondrona io ny tetika Dandelion – toetra mifandray amin’ny angano momba ny razamben’ny bitro, miaraka amin’ny tetika tonga lafatra hanamora ny diabe. Ny Gac Nai, Silver Grey, ary Raspberry malaky, tsy miovaova ary mahatanty dia mpiady lehibe amin’ny ady amin’ny lalana. Ny bitro tsirairay manana ny heriny dia miezaka hatrany ho tonga amin’ny tany vaovao.
Avy eo dia miseho ny endri-tsoratra vaovao, miaraka amin’ny fahavalo sy namana. Fa ny tena zava-dehibe dia tsapany fa nianatra zavatra betsaka izy ireo, izay mety tsy ho vitany nandritra ny androm-piainany manontolo, raha tany ambanivohitra no nipetrahany. Lasa bitro tena tsara izy ireo, zazalahy matanjaka sy mafy orina ka na dia ny ho taolana aza dia mety ho sarotra ny mamolavola azy. Fa ho setrin’izany dia tsy kely akory ny vidiny tokony haloa amin’izany.
Tena tsy tiako hambara be loatra ny votoatin’ity tantara ity satria mety hampihena ny fahafinaretana izany rehefa miaina izany ianao. Avelao ho vaovao ny zava-drehetra, vakio ary tsapao amin’ny tenin’ny mpanoratra manokana, dia hahita tontolo lehibe misokatra miaraka amin’ny tsiro hafahafa avy amin’ny kirihitra voaroy, na voninkazo pea. Avy eo, nibanjina ireo hazo oaka lehibe, ireo hantsana avo dia tsy nahalala hoe hatraiza ny halaviran’ny tampon’isa, na mipoitra mba hijery izao tontolo izao manerana ny faravodilanitra. Raha mpanakanto aho, ny zavatra voalohany hataoko dia ny mametraka ny borosy sy ny loko amin’ny sary tena izy amin’ny eritreritro, tena tsara tarehy sy mahafatifaty. Amin’ny ankapobeny dia afaka mora leo ianao rehefa mamaky famaritana lava momba ny sehatra, fa apetraho amin’ny toerana mavitrika ny tenanao, ataovy ny sarinao eo ambany fitarihan’ny mpanoratra, ho hitanao fa tena mahafinaritra izany. “Ampidiro ambany ny masonao ary avelao hiakatra ny fisainanao.”
READ Review sách: Quản Trị Nguồn Nhân Lực | Anybook.vn
Ny soatoavin’ny olombelona an’ny Rabbit Hill
Ny Rabbit Hill dia tsy tantara an-tsary ho an’ny ankizy fotsiny – mampihomehy, mahatsikaiky ary avy eo adino – fa ny akony dia mitoetra ao am-pon’ny mpamaky lalina. Ho an’ny ankizy dia fitsangatsanganana mahavariana misy toetra tsara hianarana, fa ho an’ny olon-dehibe kosa, miafina ao ambadik’ireo teny ireo ny filozofia momba ny fiainana. Mampahatsiahy antsika ny Rabbit Hill mba tsy ho levona mihitsy amin’ny fampiononana ataontsika ho azy, manome voninahitra ireo izay miady amin’ny mpampahory ao an-tranony sy mitady fahafahana. Noho izany, dia naneno fanairana ihany koa ny mpanoratra mba hampitandremana ny amin’ny fandripahana ny bibidia, ary koa ny habibiana ataon’ny olombelona izay manimba tsikelikely ny fiainan’ny karazam-biby rehetra eto ambonin’ny tany sy ny tenany. Amin’izy ireo, ny olombelona dia toy ny fahavalo atahorana indrindra sy mampidi-doza indrindra, miaraka amin’ny milina brum – brum izay afaka manimba ny karazany rehetra. Tsy afaka manaiky ho bitro ao an-trano koa izy ireo, mandany tontolo andro ao anaty tranom-borona kely tsy mahafantatra ny any ivelany. Noho izany dia misafidy ny handeha izy ireo, misafidy ny hanalavitra ny olona, ​​misafidy ho an’ny tenany ny fiainana malalaka sy ny tena fahasambarana.
Misy fitenenana tena tiako amin’ity asa ity hoe: “Tsy manao toy ny olombelona ny biby. Raha tsy maintsy miady izy ireo dia miady, raha tsy maintsy mamono dia mamono azy. Tsy miara-mipetraka anefa izy ireo, mampiasa ny faharanitan-tsainy hieritreretana fomba samihafa handravana ny fiainan’ny zavamananaina hafa na handratra azy. Manaja tena sy mahafinaritra izy ireo.” Eny, vonona hiady amin’ny fiainana sy ny fahafatesana mba hiaro ny mpiara-belona aminy, hanaporofo ny tenany, na handrombaka haza tsotra izao, fa ny azo antoka dia tsy hanana eritreritra ny hamotika azy ireo mihitsy izy ireo, handrava karazana hafa. Mankatò ny lalàn’ny zavaboary sy ny zavaboary velona izy ireo. Tsy manao na inona na inona handikana ireo fitsipika ireo izy ireo. Izany koa no tena ankafiziko ireo biby ireo.
Famaranana ity lahatsoratra ity dia zavatra iray ihany no tiako holazaina aminao, raha tia boky ianao dia aza atao tsinontsinona ity boky ity. Vakio sy tsapao amin’ny fonao manontolo izany tahaka ny nataon’i Richard Adams fony izy nanoratra ity boky ity.
Mpanoratra: Jendy Nguyen – Bookademy
Midira ao amin’ny Ekipa Bookademy hahazoana fahafahana mamaky sy mandray boky mahaliana, misoratra anarana ho CTV amin’ny rohy: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
Previous: Top 45 Hình Nền Anime Boy Full HD “Cực Đẹp” Cho Máy Tính Của Bạn | Anybook.vn
Next: Chủ động trong công việc là gì? Làm sao để phát triển tinh thần chủ động? | Anybook.vn